[ , ] Tao amin'ny toko, dia tena nanam-bintana aho momba ny fanoratana lahatsoratra. Na izany aza, tsy manatsara ny kalitaon'ny tombantombana foana izany. Manoritsoritra toe-javatra iray izay mety hampihena ny sandan'ny tombantomban-tsarimihetsika. (Mba hahazoana tsindrimandry, jereo ny Thomsen (1973) .)
[ , , ] Famolavola sy fitarihana ny fanadihadiana tsy misy azony amin'ny Amazon Mechanical Turk hanontany momba ny fananana fiara sy ny fihetsika manoloana ny fifehezana fiara. Amin'izay dia azonao atao ny mampitaha ny tombantombanao amin'ireo olona azo avy amin'ny fampahalalana azo tsapain-tanana, azafady mba apetraho amin'ny fanadihadiana avo lenta toy ny an'ny mpikaroka ao amin'ny Pew Research Centre ny fanontaniana sy ny valiny.
Hafiriana no noraisinao? Ohatrinona ny vidin'ity? Ahoana no ampitahàny ny demografikan'ny modely amin'ny fandraiketan'ny mponina Amerikana?
Inona no lazain'ny fanjonoana amin'ny alàlan'ny fampiasanao ny modelinao?
Ampifanaraho amin'ny tsy fampisehoana ny ohatrao ampiasainao amin'ny fampiasana post-stratification na teknika hafa. Ankehitriny ahoana ny tomban'ezaka momba ny fananana basy?
Ahoana ny ohatr'ireo tombombarotra azonao ampitahaina amin'ny fanombanana farany avy amin'ny santionany? Inona araka ny eritreritrao no manazava ny tsy fitoviana, raha misy?
Avereno ny fanontaniana (b) - (d) ho an'ny fihetsika mifehy ny fitaovam-piadiana. Ahoana ny maha-samihafa ny fikarohana anao?
[ , , ] Goel sy mpiara-miasa (2016) nametraka 49 fanontaniana misongadina avy amin'ny General Social Survey (GSS) momba ny fisainana maro samihafa ary misafidy ny fanadihadiana avy amin'ny Foibem-pikarohana Pew mba hampisongadina ny sasantsasany amin'ireo mpanadihady nalaina avy amin'ny Amazon Mechanical Turk. Avy eo dia nanitsy ny tsy fisehon'ny tarehimarika ny angon-drakitra izy ireo tamin'ny fampiasana tetikady fampitahàna modely ary nampitaha ny fanombatombana nataon'izy ireo tamin'ireo olona avy amin'ny fanadihadiana GSS sy Pew. Manaova fanadihadihana mitovy amin'ny Amazon Mechanical Turk ary manandrana manamboatra sary 2a sy 2b amin'ny alàlan'ny fampitahàna ny tombantombanao amin'ny alàlan'ny fanombatombana avy amin'ireo andrana farany amin'ny GSS sy Pew surveys. (Jereo ny takila appendix A2 ho an'ny lisitry ny fanontaniana 49.)
Ampitahao ary ampitahao ny valin'ny valiny amin'ny an'ireo avy amin'ny Pew sy GSS.
Ampitahao ary ampitahao amin'ny valin'ny fanadihadiana Mechanical Turk ao Goel, Obeng, and Rothschild (2016) ny valiny.
[ , , ] Fikarohana maro no mampiasa ny tatitra momba ny finday amin'ny finday. Ity dia toerana mahaliana izay ahitan'ny mpikaroka fitondran-tena amin'ny fitondran-tena voamarina (jereo ohatra Boase and Ling (2013) ). Ny fihetsika roa mahazatra manontany momba ny fiantsoana sy ny SMS dia ny "roalahy" ary "amin'ny herinandro lasa."
Alohan'ny hanangonana tahirin-kevitra, inona amin'ireo fepetra momba ny tenanao manokana no heverinao fa marina kokoa? Nahoana?
Ampiasao ny dimy amin'ireo namanao mba hanadihady anao. Azafady fintino fohifohy hoe ahoana no nahitana ireo namana dimy ireo. Azonao atao ve ny mampihomehy ny paikady manokana amin'ny sandao?
Anontanio azy ireto fanontaniana mikrosurvey manaraka ireto:
"Impiry ianao no nampiasa ny findainao mba hiantso ny hafa omaly?"
"Firy ny hafatra an-tsoratra nalefanao omaly?"
"Impiry ve ianao nampiasa ny findainao mba hiantso ny hafa ao anatin'ny fito andro farany?"
"Impiry ianao no nampiasa ny findainao handefasana na handraisana hafatra / SMS ao anatin'ny fito andro farany?"
Raha vantany vao tapitra ity microsurvey ity, dia mangataha manamarina ny fampiasana ny fampiasana azy araka ny fidirana amin'ny telefaona na ny mpanome tolotra azy. Ahoana ny fampiasana ny tatitra ho an'ny tenanao raha oharina amin'ny data log? Inona no marina indrindra, ary inona no marina indrindra?
Ampifandraiso ankehitriny ny angon-drakitra nangatahinao tamin'ny angona avy amin'ny olon-kafa ao amin'ny kilasinao (raha toa ka manao izany ianao ho an'ny kilasy). Amin'ny alalan'ity daty lehibe ity, avereno ampahany (d).
[ , ] Schuman sy Presser (1996) manamarina fa ny lamina napetraky ny fanontaniana dia tsy maintsy misy fanontaniana roa: ny fanontaniana apetraky ny ampahany izay misy fanontaniana roa dia mitovy amin'ny lanjany manokana (ohatra: fanombanana roa kandidà ho filoham-pirenena); ary fanontaniana manontolon'izy ireo amin'ny ankapobeny ny fanontaniana ankapobeny dia manaraka fanontaniana voafaritra kokoa (ohatra, manontany hoe "Manao ahoana ny asanao amin'ny asanao?" arahin'ny "Manao ahoana ny fiainanao amin'ny hoavy?").
Manamarika karazana fanodinkodinam-bola roa hafa izy ireo: misy fiantraikany arakaraka ny vokatra rehefa misy ny valiny amin'ny fanontaniana manaraka izay vao tonga kokoa (raha tsy misy izy ireo) ho an'ireo nomena fanontaniana teo aloha; Ny fiantraikan'ny fanoherana dia mitranga rehefa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny valin'ny fanontaniana roa.
Mamorona fanontaniana misy ampahany sasany izay heverinao fa hisy fiantraikany goavana amin'ny fanontaniana; fanontaniana roa izay heverinao fa hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny lamina; ary fanontaniana anankiroa izay tsy mety ny filaharanao izay eritreretinao. Manaova fanandramana momba ny fanadihadiana ao amin'ny Amazon Mechanical Turk mba hizaha ny fanontanianao.
Firy ny ampahany misy ampahany amin'ny ampahany izay azonao noforonina? Fiatrehana tsy fitovizan-kevitra ve izany?
Manao ahoana ny habetsaky ny fiantraikany amin'ny ankapobeny izay azonao noforonina? Fiatrehana tsy fitovizan-kevitra ve izany?
Nisy fiantraikan'ny lamandy ve tao amin'ny mpivady izay tsy nieritreretanao fa tsy maintsy hisy ny lamandy?
[ , ] Miorina amin'ny asan'ny Schuman sy ny Presser, Moore (2002) mamaritra ny fiantraikan'ny fanodidinan'ny fanontaniana: fampidiran-tsakafo fanampiny sy fikajiana. Raha mifanohitra sy vokatry ny fiantraikany ny vokatra dia vokatry ny fanombanana ny valin'ny fanadihadiana momba ireo zavatra roa mifandraika amin'ny tsirairay, ny vokatra mahavariana sy mahasalama dia novokarina rehefa nahatsapa kokoa ny hevitry ny mpanadihady amin'ny sehatra lehibe izay napetrak'ireo fanontaniana. Vakio ny Moore (2002) , ary avy eo dia mamorona andrana fanadihadiana momba ny MTOUR mba hanehoana ny vokatra mampiavaka na mahasolotena.
[ , ] Christopher Antoun sy ireo mpiara-miasa (2015) nanao fikarohana mba hampitaha ny karazana mason-tsivana azo avy amin'ny loharanon-tserasera efatra samihafa: MTURK, Craigslist, Google AdWords ary Facebook. Manoroka fanadihadiana tsotra ary mamerina mpandray anjara amin'ny alalan'ny loharanom-baovao roa farafahakeliny an-tserasera (ireo loharano ireo dia mety tsy mitovy amin'ireo loharano efatra ampiasaina ao Antoun et al. (2015) ).
Ampitahao ny vola lany amin'ny fampiasana ny vola sy ny fotoana - eo amin'ny loharano samihafa.
Ampitahao ny endrik'ireo tahiry azo avy amin'ny loharano samihafa.
Ampitahao ny kalitaon'ny angona misy eo amin'ny samples. Ho an'ny hevitra momba ny fomba handrefesana ny kalitaon'ny mpanjifa, jereo Schober et al. (2015) .
Inona no loharano tianao indrindra? Nahoana?
[ ] Ho fanamafisana ny valin'ny fitsapan-kevitry ny UE 2016 (izany hoe, Brexit), YouGov-tranombarotra iray mifototra amin'ny aterineto mifototra amin'ny fikarohana an-tserasera amin'ny tontolon'ny valim-panadihadiana 800.000 any Royaume-Uni.
Misy famaritana amin'ny antsipiriany ny modely statistika an'ny YouGov dia hita ao amin'ny https://yougov.co.uk/news/2016/06/21/yougov-referendum-model/. Raha ny fitenenana tamim-pitenenana, YouGov no nisafidy ireo mpifidy ho karazany noho ny safidin'ny safidim-bahoaka tamin'ny taona 2015, ny taona, ny kalitao, ny lahy sy ny vavy, ary ny daty ny tafatafa, ary koa ny fari-piadidiam-piainan'izy ireo. Voalohany, nampiasa angona nangonina avy amin'ny mpanentana ny YouGov izy ireo mba handinihana, anisan'ireo izay nifidy, ny isan'ireo olona isaky ny sokajy mpifidy izay nikasa hifidy. Nanombantombana ny fanombohan'ny karazam-pifidianana tsirairay avy izy ireo tamin'ny fampiasana ny 2015 British Election Study (BES), fanadihadiana iray tato ho ato, izay nanamarina ny fiverimberenan'ny lisi-pifidianana. Farany dia nanombatombana izy ireo fa olona maromaro avy amin'ny sokajin'ny mpifidy tsirairay no mifototra amin'ny fanadihadiana farany momba ny valim-pifidianana sy ny fanadihadiana isan-taona (miaraka amin'ny fampahalalana fanampiny avy amin'ny loharanom-baovao hafa).
Telo andro talohan'ny nifidianana, YouGov dia nampiseho taratra roa ho an'ny Leave. Tamin'ny faran'ny androm-pifidianana, ny masoivoho dia nanambara fa ny vokatr'izany dia tsy lavitra loatra ny antso (49/51 Remain). Ny fandalinana farany ny andro dia naminavina 48/52 ho an'ny Remain (https://yougov.co.uk/news/2016/06/23/yougov-day-poll/). Raha ny marina dia tsy nahitana ny vokatra farany (52/48 Leave) izany tombanana izany amin'ny efatra isan-jato.
Ampiasao ny rafitry ny fanadihadiana fanao rehetra voaresaka ato amin'ity toko ity mba hamaritana izay mety ho diso.
Ny valintenin'i YouGov taorian'ny fifidianana (https://yougov.co.uk/news/2016/06/24/brexit-follows-close-run-campaign/) dia nanazava hoe: "Toa an-tapitrisany izany noho ny fihodinana izany-zavatra izany Nolazainay fa ny zava-drehetra dia tsy maintsy manan-danja amin'ny vokatr'io hazakazaka voalanjalanja io. Ny modely nomen'anay dia nifototra tamin'ny ampahany, raha toa ka nifidy tamin'ny fifidianana ankapobeny ny mpandray ny valim-pifidianana ary ny fiakaran'ny vidim-pifidianana mihoatra ny an'ny fifidianana ankapobeny dia mampihena ny modely, indrindra fa any Avaratra. "Manova ny valinteninao amin'ny ampahany (a) ve izany?
[ , ] Soraty ny simulation hanazava ny fahadisoana rehetra miseho eo amin'ny toetry ny 3.2.
Mamoroa toe-javatra iray izay tsy ahavitàn'ireo diso ireo.
Mamoròna toe-javatra iray izay ahitana ny fahadisoana mifamihina.
[ , ] Ny fikarohana momba ny Blumenstock sy ireo mpiara-miasa (2015) dia nanorina ny modely fianarana milina izay afaka mampiasa ny angon-drakitra nomerika mba haminavina ny valin'ny fanadihadiana. Amin'izao fotoana izao dia hanandrana zavatra mitovy amin'ny daty samihafa ianao. Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) nahatsikaritra fa ny tian'ny Facebook dia afaka maminavina ny toetran'ny tsirairay sy ny toetrany. Mahagaga fa mety ho marina kokoa noho izany aza ireo faminaniana ireo raha oharina amin'ireo namana sy mpiara-miasa (Youyou, Kosinski, and Stillwell 2015) .
Vakio ny Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) sary 2. Ny antontan'isa azony dia hita ao amin'ny http://mypersonality.org/
Ankehitriny, avereno sary 3.
Farany, andramo ny modely ao amin'ny pejiny Facebook anao: http://applymagicsauce.com/. Tena mahasoa anao ve izany?
[ ] Toole et al. (2015) nampiasa rakitra antsipiriany (CDRs) avy amin'ny finday mba hampahafantarana ny fironana tsy miankina amin'ny asa.
Ampitahao ary ampitahao ny famolavolana fandinihana ny Toole et al. (2015) miaraka amin'i Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) .
Heverinao ve fa ny CDR dia tokony hanolo ny fanadihadiana nentim-paharazana, hanampiana azy ireo na tsy ho ampiasaina mihitsy ho an'ireo mpiasan'ny governemanta hitazona ny tsy fisian'ny asa? Nahoana?
Inona no porofo ahafahanao mandresy lahatra anao fa ny CDR dia afaka manolo tanteraka ny fepetra nentim-paharazana amin'ny tahan'ny tsy fananana asa?